SIDA LOO KORO BARADHADA MACAAN EE DALKA - KHUDAARTA CAGAARAN
Ugu Weyn Ee Khudaarta cagaaran
Baradho macaan - Baradhada macaan ee macaan
Baradho macaan waa warshad kuleyl ah oo dhadhaminaysa sida barafka macaan. Inkasta oo ay asal ahaan ka soo jeedaan koonfurta, waxay si fiican ugu riixday hareeraha dhexe.
Inta lagu jiro koritaanka, waxay ku faaftaa dhulka, sida geedka canabka ah, oo ka dhiga kalo xoqan. Waa digriiga waana la soo ururin karaa, cunto karisna karaa. Sida ay u koraan sida mucjiso ee beerta my iyo badbaadiyo beergooyska, waxaan ka hadli doonaa dheeraad ah.
Noocyo baradho ah oo macaan
Qiyaastii adduunka ayaa ku koraya tiro badan oo ah noocyo badan oo baradhada macaan, laakiin dhammaantood maaha mid ku habboon beerashada cimiladeena. Beeraha guriga waa in ay fiiro gaar ah u leh noocyada hore-bislaada dhirta, taas oo xilli sii kordhaya waa 90-110 maalmood.
Laakiin xitaa xaaladahaas oo kale, waxaad heli kartaa noocyo kala duwan oo dalagyo ah oo midabkoodu yahay midab, saxaro iyo dhadhan. By habka, noocyo qaar waxay leeyihiin dhadhan macaan waxoogaa yar, qaar kale oo si cad u macaan. Waxaa jira kuwa aan si fudud u baran karin baradhada caadiga ah, laakiin waxaa jira digriiga leh dhadhan yar oo nafaqo leh.
Sidaa darteed, way adagtahay in la sheego sida dhirta barafka macaan. Aynu si kooban u sharaxno noocyada ugu muhiimsan ee sii kordhaya ee ku yaala bartamaha dhexe:
"Purple" waxay magaceeda u heshay midabka madow ee mugdiga ah, taasoo sii jirtey xitaa ka dib markii daaweynta kulaylka. Waxay dhadhanaysaa sida baradho caadiga ah ee noocyada ugu fiican. Waxay leedahay celcelis ahaan Bisaylkiisa, wuxuu ku jiraa bartamaha xagaaga. Waxaa la aaminsan yahay in ay ka kooban tahay walxaha sii dheereynaya nolosha.
"Japanese" Waxay leedahay jimicsi fudud iyo maqaarka cas, waxa kale oo dhadhan sida baradhada, laakiin more macaan iyo xoogaa qallalan.
"Tynung T-65" waxaa lagu bilaabay Taiwan. Tani waa mid ka mid ah noocyada hore ee ugu wanaagsan, kaas oo sameeya digriiga cagaaran. Waxay leedahay jiil huruud ah iyo maqaarka casaan. Adkeysiga cudurada iyo cayayaanka.
"O'Henry" - qallalan, macaan oo leh jilicsanaan jaale ah iyo darajo jilicsan maqaarka. Taabashooyinka cudurada. Ripens 90 maalmood.
Guul-100 waxay ku baahsan tahay dhulkeennaba, waxay soo jiidaneysaa wax soo saarka xitaa xataa sanado qallalan. Waxa kale oo leh hilib huruud ah iyo dhadhan macaan.
"Ginseng Red" magaceeda ayaa laga helay maqaarka caddaanka ah, inkastoo jidhkoodu yahay caddaan-cadaan. Digriiga qoyan waxay siinayaan wax wanaagsan.
"Manchurian" wuxuu leeyahay jilicsanaan jilicsan oo jilicsan, daboolay maqaarka cas. Nidaamyada koritaanka iyo wax-soosaarku waa kuwo aad u wanaagsan meelaha yar yar.
"Cadaan" waa farac ah noocyo caan ah, wuxuu leeyahay macaan yar, ugu badan ee la mid ah baradhada caadiga ah.
"Garnet" Caan ka ah Maraykanka iyo waxaan jecel nahay carruurta ee midabka casange ee jidhka iyo dhadhan macaan weyn. Run, dhalidda ma aha mid aad u sareeya.
"Mooska" waxay si fiican u qaadataa xaaladaha cimilada ee kala duwan. Midabka casaan-gacmeedka ah ee qoyan wuxuu ku daboolan yahay dufan-madow.
"Beoregard" - A nooc ka mid ah American noocyo badan oo adkaysi u cudurada iyo cayayaanka. Waxaa lagu gartaa wax-soosaarkooda sare, halka digriiga qallajin yar. Tani waa kala duwanaansho hore oo leh qaan gaar ah ilaa 110 maalmood. Waxay leedahay jimicsi macaan mugdi ah iyo maqaar naxaas leh.
"Ruby Carolina" waxay magaceeda u heshay maqaarka casaan-gaduudka ah iyo hilibka quruxda badan. Macaan, qoyan, dhif ah jiran.
"Vardaman" waxay la mid tahay dhadhanka baradho caadiga ah, inkasta oo uu leeyahay jinsiga quruxda badan iyo macaan yar.
"Covington" kala duwan oo qoyan oo macaan. Digriiga waxay leeyihiin dusha flat. Waa hagaagayaa.
Geedo korriin ah guriga
Habka ugu weyn ee baradho macaan - sprouts ama canabkiinna, kuwaas oo laga gooyay xididada. Weli waxaa suurtagal ah in ay sii kordhaan miraha, laakiin ma aha noocyo kala duwan oo ay ku siiyaan miisaan ku filan. Sidaa darteed, miraha waxaa loo ururiyaa inta badan loogu talagalay taranta, gaar ahaan tan ay Germinate aad u adag.
Waa muhiim! Barafka macaanku wuxuu leeyahay xilli sii kordhaya, inta lagu jiro taas oo ah in ay helaan kulayl badan. In la siiyo xaaladaha noocaas ah ee jawiga gudaha waa adag yahay, digriiga beeray, ma uu heysto waqti ay ku bilaabaan. Sidaa darteed, baradhada macaan waa la koray oo keliya geedo.
Waqtiga beeritaanka tuberku waxay ku xiran tahay meesha aad ka soo iibsatay. Haddii dukaanka, waxaa la jaray 2-4 bilood ka hor laga beerto. Tuber ka iibsaday batatovods waxaa la dhigay in 1-2 bilood.
Si aad u beeri tuber on geedo laba siyaabood: horjoogsan ama toosan.
Xaaladda kowaad, taangiga leh godadka dheecaanku waxay ka buuxsantaa dhulka cufan, ciid waxa lagu shubay sare ee 1-2 cm (mararka qaarkood leh balka). Tuber ayaa udhawaaqa dhinacyada kala duwan, ciidda badanaa waa la waraabiyaa.
Weelka waxaa la dhigaa meel leh heerkul ka sarreeya 20 ° C oo si joogto ah u waraabiyo. Sida ugu dhakhsaha badan ee sprouts muuqata, awoodda ayaa loo qaadi karaa meel wanaagsan oo iftiin leh. Waxaad sugi kartaa caleemaha si ay u gaaraan 10-15 cm, laakiin markaa waa in si tartiib tartiib ah loo barto iftiinka.
Ma taqaanaa? Haddii tuubadu ay u jajabiso, qaybta la jabiyay waa la gooyaa, gooyana waxaa lagu daaweeyaa "rinjiga cagaaran".
Beerto qodan waxay ku lug leedahay meesha dabiiciga ah ee digriiga, markay koraan beerta. Waxaa jira dhowr siyaabood oo ah biqilka noocan oo kale ah. Doorashadu waxay kuxirantahay kala duwanaanta baradhada macaan.
Haddii uu si dhakhso ah u guga, biqilka qalalan waxaa loo isticmaali karaa marka tuber waxaa lagu beeray sida qaabka qaabka, laakiin waxaa loo dhigay si toos ah oo ma biyo.
Iyada oo "biqil" qoyaan, waa 1/3 vertical si biyo ah. Habkan, waxaa loo oggol yahay in la gooyo tuubada si dhexdhexaad ah uguna jilicsan. Waxay sidoo kale ku daadi karaan waxoogaa biyo ah, gooyaan ama loola dhaqmo kaarboonka firfircoon iyo si tartiib ah loogu cadaadiyaa ciidda diyaarisay.
Marka sprouts muuqanayaan, waxay sugayaan marka ay gaaraan ugu yaraan 15 cm dhererka oo la gooyaa si ay u jiraan 2-3 internodes ah jeermiska. Waxay ku jiraan biyaha oo sugaan xididada.
Waa muhiim in la ogaado in dhirta ay tahay mid aad u qorraxsan. Xitaa hooska yar ee ku dul yaal waa wax khatar ah. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah si ay u koraan geedo iyo waxa laftiisa laftiisa oo kaliya dhinaca koonfureed iyo meelo iftiin leh.
Waa muhiim! Waxyaabuhu kuma xidhna digriiga isla markaana koraan meeshii aan diirimaad lahayn. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la abaabulo kululaynta meesha uu korayo. Sababtoo ah, tiro badan oo ka mid ah qoraxdu ma aha damaanad ah koritaanka fiican. Qadarka kuleylka la soo saaro waa muhiim.
Ciidda ugu fiican ee baradho macaan waa silsilad, ciid, ciid, loamy, taas oo biyaha ku yaala qoto dheer oo ka badan laba mitir. Waxaa lagama maarmaan ah in la qodo ciidda, sababtoo ah dhirta ayaa jecel yahiin xakamaynta ciidda, laakiin ma qoto dheerayn 20 cm, haddii kale xididdadu waxay noqon doontaa mid aad u dheer iyo dhuuban, iyo xididdada aan la xirin iyaga.
Bacrimiya ciidda beerashada waa inay ahaataa dayrta. Waqtigaan, waa in lagu qodaa bacriminta at heerka of 3 kg ee digada qudhuntay ama 5-6 kg ee compost, 20 g of superphosphate, 15 g of potassium sulfate halkii mitir ee ciidda.
Waraabiyo iyo bacarimiso ciidda
Warshadu waxay u adkaysantaa abaarta, laakiin bilaha ugu horeeya, marka ay jirto korriin xoog ah oo sheyga, waa in si badan loo waraabiyo. Si kastaba ha ahaatee, waqti ka dib, mugga biyaha waa in la yareeyo, iyo laba toddobaad ka hor goosashada, joojin guud ahaan.
Inta lagu jiro xilli sii kordhaya hal ama laba dheeraad ah bacarin leh Bacriminta dabiiciga ah waa inay dhacaan. Inta lagu jiro bartamaha August, waxay isku dayaan in ay sameeyaan dharka ugu sarreeya leh content potassium, maxaa yeelay xilligan goosashada waa la dhigay. In kasta oo uu ka jawaab celiyo quudinta dabiiciga ah.
Ma taqaanaa? Eeg caleenta dhirta. Haddii ay soo iibsatay midab casaan ah, casaan ama casaan - taasi waa calaamad cad oo ah in barafka macaanku uusan haysan qufac oo ku filan.
Sida loo abuuro geedo dhul furan
Haatan waxaynu aragnay goorta la beeri karo dhulka. Jawaabta waa mid fudud - marka xididdadu noqoto qiyaastii 5 cm oo dheer, haddii ay weli tahay mid aad u qabow dhul furan, geedo waxaa lagu dhejin karaa koobabka carrada, laakiin ha joogin muddo dheer sidaa daraadeed xididada ma dhexdhexaadin, burburinta goosashada xiga.
Ka taxadar sidan markaad degto dhul furan. Haddii xididadu aad u badan yihiin, waa la gooyaa. Waxaa lagu talinayaa in la abuuro sprouts ku dhowaad qiyaas ahaan xagga dhulka. Kadibna xididdadu waxay ku yaalaan meel u dhow dusha sare waxayna leeyihiin qiyaasta isku mid ah. Laakiin kiis kasta, 2-3 knot waa in lagu dhajiyo dhulka..
Waxaa suurtogal ah in lagu beero warshad dhul furan ka dib markii uu dhirta ugu dambeysay marka ciidda ay kuleylayso ilaa 18 ° C. Heerkulka 15 ° C, waxaa laga yaabaa inaanay koraan, iyo 10 ° C, waxay xitaa u dhiman kartaa.
Waa suurad wacan in la sameeyo sariiraha badan, sababtoo ah digriiga waxay leeyihiin dherer sare. Marka ugu horeysa waa in lagu daboolo filim, iyadoon doorasho hufan. Sidaas awgeed dhirtu waxay qaadan doontaa qiyaasta kuleylka, iyo haramaha la'aan la'aanta hawada ayaa dhiman doonta. Ka feker habka waraabinta filimka kahor.
Waa muhiim! Haddii aadan isticmaalin filin, iska hubi in waxyaabaha aysan ka helin xarumaha internodeska, haddii kale waxaad heli doontaa dhalid hoose. Si arrintan loo sameeyo, si joogto ah u maraya safafka iyo kor u laanta, jarida xididada yar yar.
Harvest waxay noqon kartaa marka caleenta uu bilaabmayo inuu huruud noqdo. Sida caadiga ah, waa 90-110 maalmood ka dib markaad degto. Laakiin waxaa muhiim ah in heerkulka ciidda uusan hoos udhicin 11 ° C. Iyadoo qoyaan, xusuusnow in digriiga hadda waa mid aad u jilicsan, oo waxay noqon kartaa masaafada dheer ee baadiyaha.
Ka dib markii goosashada, isla markiiba xulo xididdada for geedo, ku dhaq iyaga xal xalal ah potassium. Kuwani waa inay noqdaan kuwo dhexdhexaad ah oo aan waxyeello lahayn.
Su'aasha kale waa sida loo xafidayo shayada si uu u ilaaliyo "badeecad" raadin wakhti dheer. Marka hore, waa in lagu hayaa toddobaadkii heerkulkiisu yahay 30 ° C iyo qoyaan qaraabo ah 90-95%, marmarka qaarkood hawo qaboojinta. Xaaladdan oo kale, digriiga waa in aan la nadiifin. Qalitaankan ka dib, maqaarka maqaarku wuu adkaanayaa, xoqitaanku wuu bogsan doonaa, dalaggu wuxuu kaydin karaa ilaa laba sano.
Haddii aysan jirin xaalado gaar ah, waxaa lagu hayaa labo asbuuc meel diiran, si joogto ah loola soconayo si aysan u korin. Digriiga waa ku habboon yihiin sanduuqyada oo lagu kaydiyaa meel qallalan, mugdi ah, meel hawo leh oo leh heerkul ah 12-20 ° C. Xaaladaha qoyan, waxay fududaan kartaa.
Qalabka waxtarka leh ee baradhada macaan
Warshadu waa caan sababtoo ah macaanka kalooriyada barafka ah waa mid hooseeya - 61 kcal halkii 100 g oo khudradeed. Intaa waxaa dheer, mugga badeecada waxaa ku jira 2.5 g oo ah borotiinka, 14 g oo dufan ah, 13.9 g of carbohydrates, 1.3 g of ash, 81 g oo biyo ah. Sidoo kale baradho macaan ayaa hodan ku ah fitamiinada B, C, PP, A, riboflavin, thiamine, niacin, ascorbic acid, fosfooraska, calcium, carotene.
Isla mar ahaantaana, contentkuna waa mid aad u hooseeya marka loo barbar dhigo baradhada caadiga ah. Inkastoo malawadka baradhada macaanku uu daweeyo cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka. Fiber nuucsan ayaa lagula talinayaa kuwa si adag u dulqaadanaya khudradda khudradda caadiga ah.
Qaar badan, su'aasha ayaa soo baxaysa haddii ay suurtogal tahay in la cuno wax cayriin ah. Jidhka qaar ka mid ah noocyo waa jilicsan oo macaan in ay adag tahay in la diido raaxadaas oo kale. Waxaa soo baxday in isticmaalka noocaas ahi uu yahay mid la aqbali karo. Laakiin, mabda 'ahaan, dalagga xididku waa mid la aqbali karo si loo sameeyo waxyaalla kala duwan, oo waxaad ka kari kartaa wax badan oo suxuunta delicious ah.
Waxyeellada iyo iskeed ujeeda in la cuno baradhada macaan
Baradho macaan ayaa inta badan lagula taliyaa haweenka ku jira menopause, sababtoo ah waxaa la aaminsan yahay in khudradda cagaarsho haween ah. Inkasta oo ay tahay arrin macquul ah, baradho macaan laguma talin inta lagu jiro uurka iyo naas-nuujinta. Sidaa darteed, waa wax aan macquul aheyn in ilmaha la siiyo.
Marka lagu daro uurka iyo nuujinta, waxaa jira noocyo kale oo dad ah oo dhaawici kara khudradda. Ugu horreyntii, kuwan waa dad leh dulqaad shakhsi ah oo sheyga. Waxa kale oo ay haboon tahay in la diido haddii aad leedahay:
boogaha caloosha ku jira;
Arrinta dhibaatada iyo faa'iidada ayaa sidoo kale laga wada hadlaa go'aaminta heerka isticmaalka khudaarta. Nafaqeeyayaalku waxay ku talinayaan in ay cunaan wax ka badan 200-300 g oo ah bishii, sharcigana waa in loo qaybiyaa laba jeer.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Khudaarta cagaaran 2019